Maamulka deegaanka Baxdo ee Bariga gobolka Galgaduud oo goob fagaare ah ku soo bandhigay saanad ciidan oo lagu furtay dagaalka shalay iyo Maxaabiis | dayniiile.com
Home WARKII Maamulka deegaanka Baxdo ee Bariga gobolka Galgaduud oo goob fagaare ah ku...
Maamulka deegaanka Baxdo ee Bariga gobolka Galgaduud oo goob fagaare ah ku soo bandhigay saanad ciidan oo lagu furtay dagaalka shalay iyo Maxaabiis
Maamulka deegaanka Baxdo ee Bariga gobolka Galgaduud iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ee ku sugan degaankaas ayaa maanta goob fagaare ah ku soo bandhigay saanad ciidan oo lagu furtay dagaalka iyo maxaabiis nool.
Sida ay sheegen Saraakiishu tirada laga dilay Al-Shabaab ayaa waxay gaareysa 70 dagaalame, oo ay kooxdu isaga carartay meydkooda kadib markii ay awoodi weysay inay qaataan.
Saraakiisha ayaa sidoo kale waxay sheegen in xubnaha la dilay ay ku jireen ajaanib, ayaga oo xusay in dagaalkii shalay lagu soo qabtay Ninkii waday gaariga laga soo buuxiyay walxaha qarxa, kaasi oo ay goobta kusoo bandhigeen.
Dagaalkii shalay ee lagu jabiyay Al-Shabaab kadib waxay ciidamada daraawiishta Galmudug iyo kuwa qalabka sida ay ka howl-galeen deeganada hoos-taga degmada Baxdo oo ay ku baacsadeen haraadiga Al-Shabaab-kii soo weeraray.
Baxdo hadda wax cabsi ah kama taagna, waxaana isla maanta deegaankaasi looga fariistay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare kaas oo maanta ka billowday guud ahaan dalka.
Arrintan ayaa muujineyso inay dhabar adeyg muujiyeen reer Baxdo oo shalay wajahay dagaal qaraar oo sababay dhimasho iyo dhaawac fara badan, kadib markii ay weerar xoogan kusoo qaadeen dagaal-yahanada kooxda Al-Shabaab oo khasaare la kulmay.
Previous articleMadxweynaha midowga Yurub Ursula von der Leyen oo taageertay dalabka Ukraine in ay ka mid noqdaan Midowga Yurub
Next articleIn ka badan saddex meelood meel dadka Suudaan oo hadda wajahaya cunto yari ba’an
Soomaaliya & Hay’adda lacagta Adduunka oo ka wada-hadlay Arrimaha deyn cafinta
Carrie Lam, the leader of Hong Kong, has announced that she...
Wasiir Uu Xilkii Ka Qaaday Axmed Karaash Oo Arrimo Muhiim Ah...